China Flanged Ball Khangela umzi-mveliso weValve kunye nababoneleli |Dongsheng
3. Ubuso ngobuso ngokwe-DIN3202 F6, ANSI 125/150
4. I-Flange ngokwe-EN1092-2, i-PN16/25.ANSI 125/150 njl.
I-Ball Check Valve -Ivalve yokukhangela i-Ball luhlobo lwe-valve yokukhangela enebhola eninzi, i-multi-channel, i-multi-cone inverted flow structure, ikakhulu eyakhiwe ngamaqumrhu angaphambili nasemva, iibhola zerabha, iicones, njl.
Ivalve yokukhangela ibhola isebenzisa ibhola eqengqelekayo egqunywe yirabha njengediski yevalve.Ngaphantsi kwesenzo se-medium, inokuqengqeleka phezulu nasezantsi kwisilayidi esidibeneyo somzimba we-valve ukuvula okanye ukuvala i-valve, kunye nokusebenza kakuhle kokutywinwa kunye nokunciphisa ingxolo Isixeko sivaliwe kwaye akukho hamile yamanzi.
YethuI-Flanged Ball Check Valveumzimba wamkela umjelo ogcweleyo wokuqukuqela kwamanzi, kunye nokuhamba okukhulu kunye nokuchasana okuphantsi, kunika amandla okutywina okubalaseleyo kuxinzelelo oluphantsi.Ingasetyenziswa kumanzi abandayo, uthungelwano lwemibhobho yogutyulo lwasekhaya lwamashishini kunye nasekhaya, kwaye lufaneleke ngakumbi kwiimpompo zamanzi amdaka angaphantsi kwamanzi.Inokufakwa kwindawo yokuphuma yempompo yamanzi ukukhusela ukuhamba ngasemva kunye nehamile yamanzi ekonakaliseni impompo.
I-Cast/Ductile iron body and cap, i-epoxy-coated body, isihlalo se-NBR/EPDM kunye ne-NBR/EPDM-coated aluminium ibhola (8″ ukuya kwi-16″ NBR/EPDM egqunywe ngentsimbi yentsimbi).
Ifumaneka ngokobukhulu: 1 1/2″ ukuya kwi-16″.
Ukulinganiswa koxinzelelo: I-PN16/10 ilinganiswe (1 1/2" ukuya kwi-8") kunye ne-PN10 (10" ukuya kwi-16").
Ibhola Hlola iValve
Umzimba we-Cast/Ductile Iron
Ubungakanani 1 1/2″ ukuya kwi-16″
2 Ibhola Isinyithi+ NBR/EPDM
4 Ibholt Yenziwe ngentsimbi eshayinayo
DN (mm) 40 50 65 80 I-100 125 150 200 250 300 350 400
Ngaphambili: Ubungakanani obukhulu beWafer Type Lift Check Valve
Okulandelayo: Ibhola enemisonto Jonga iValve